Tora mukana we "12starapps" yekutengesa kweKisimusi | Ndinobva mac
Tora mukana we «12starapps» kutengesa kweKisimusi
Tichitora mukana wekuuya kweKisimusi nemazororo evashandisi vazhinji, chirongwa chitsva chinotibvumidza kunakidzwa nemitero yakanakisa pane mamwe ekunyorera kwakanyanya kweMac atinogona kuwana muApp Store. I "12starapps", chirongwa chinoitwa nevanozvimirira vekuEurope uye vane zita rinoreva nyeredzi gumi nembiri dzinoonekwa pamureza weEuropean Union.
Chinangwa che "12starapps" ndeyekupa hukuru hukuru kune vanogadzira maapplication kubva kuOkare Continent uye nekuda kweizvi vauya pamwechete nekupa sarudzo yekungwarira yemhando yepamusoro yezvikumbiro zvaunogona kuwana iye zvino nemitengo yakadzikiswa. Nezuro ndakakupa pfupiso neapp Ulysses iyo, kekutanga mukati memakore anopfuura maviri, inowanikwa ne25% dhisikaundi. Asi iwe unewo zvimwe maapplication ari kutengeswa kuti iwe unogona kutora mukana we. Rangarira kuti uku kusimudzira kunoshanda kusvikira anotevera Ndira 5 saka usarasikirwa nemukana.
1 GhostReader Uyezve
4 Shamwari iri kure
GhostReader Uyezve chishandiso "Chinyorwa kune Kutaura", ndiko kuti inoshandura mavara akanyorwa kutaurwa. Unogona "kunyora, kurongedza uye maka mameseji ako nematagi ezwi" asi zvakare gadzira audiobooks, podcasts, kana kuongorora chinyorwa chinoshandisa izwi rakasiyana kune wega hunhu.
Unogona kusarudza izwi raunoda chero nguva, kana "rega kutsvaga mutauro kukuitire"; iwe unogona zvakare "Teerera kunenge chero chinyorwa paMac yako": Zvinyorwa zveIzwi, PDF, nezvimwe. tumira mameseji kune iTunes odhiyo makodhi kana "shandisa GhostReader Plus kunyora nekugadzirisa basa rako".
«GhostReader Plus iri parizvino yakanangana neChirungu neFrenchasi inogona kushandiswa kuverenga zvinyorwa mumitauro yakawanda. '
Mutengo waro wenguva dzose uri € 39,99 asi ikozvino unogona kuiwana ne50% dhisikaundi ye € 19,99 chete.
«Yakakura inowedzera kunakidza, matsva macOS nzvimbo uye kugona kwekushandisa pamushonga wega wega. Shandisa iyo yepakati mbeva bhatani kuti nekukurumidza chinja nzvimbo kana kuvhura Mission Kudzora uchishandisa manongedzo. Kana kumonera yeguru vhiri 2D nzvimbo switch switch ».
Mutengo waro wenguva dzose uri € 9,99 asi ikozvino unogona kuuwana ne50% dhisikaundi ye € 4,99 chete pano.
Ulysses iri iyo yakanakisa chinyorwa mhariri yemacOS (uye zvakare yeiyo iPhone uye iPad). Ndakambokuudza nezvake zvakadzama nezuro mu iyi yakakosha posvo Uye ikozvino, kwenguva yekutanga kubvira 2014, iri kutengeswa.
Ulysses akahwina mubairo weakanakisa app muApp Store muna2013 na2014; gore rino, yaive yekuhwina iyo Apple Dhizaini Mubairo 2016.
Mutengo waro wenguva dzose uri € 44,99 asi ikozvino unogona kuiwana ne25% dhisikaundi ye € 32,99 chete.
Shamwari iri kure
«Remote Buddy ndiyo mhinduro imwe chete kune yako ese ari kure Mac anoda. Shandisa chero eakawanda anowirirana ari kure anotonga, senge Apple Remote, iyo Logitech Harmony Smart Remote, iyo iPhone uye Apple TV, kudzora pamusoro pezana Mac mashandisiro.
Mutengo waro wenguva dzose uri € 24,99 asi ikozvino unogona kuuwana nechidimbu che € 19,99 chete pano.
«Hydra inokutendera gadzira zvirinani mifananidzo yepamusoro ine simba (HDR) kubva pane seti yekufumura, zvinobata kutora rima uye rakajeka nyaya kuti zviite zvakasikwa kana kusimudzira padariro mutambo. '
Mutengo waro wenguva dzose uri € 59,99 asi ikozvino unogona kuiwana ne50% dhisikaundi ye € 29,99 chete.
Iyo "iyo Mac OS X yekuunganidzwa kwemavara kunyorera kwevagadziri uye vanogadzira izvo zvinoita kuti zvive nyore unganidza, gadzirisa, kuronga uye kutumira mavara kubva kune chero pikisheni pachiratidziri".
Mutengo waro wenguva dzose uri € 9,99 asi ikozvino unogona kuiwana ne30% dhisikaundi ye € 6,99 chete.
Byword ndeye yakajeka mavara edhita, ine mashandiro uye hunhu hwakafanana chaizvo neUlysses, iyo inochengeta zvinyorwa zvako zvese zvakawiriraniswa pakati pe iPhone, iPad neMac uchishandisa iCloud neDropbox. "Yakagadzirirwa kuMarkdown nemaitiro mapfupi, isingakanganise syntax kuratidza uye chiratidzo cheMarkdown" uye zvakare inobvumidza dzakasiyana nzira dzekunze nekutepfenyura muWordPress, Medium, nezvimwe.
Mutengo waro wenguva dzose uri € 11,99 asi ikozvino unogona kuiwana ne50% dhisikaundi ye € 5,99 chete.
Chishandiso che gadzirisa uye gadziridza mifananidzo.
Mutengo waro wenguva dzose uri € 2,99 asi ikozvino unogona kuuwana uine 66% dhisikaundi ye € 0,99 chete, kunyange ichiratidzika yemahara muApp Store.
Mutengo waro wenguva dzose uri € 19,99 asi ikozvino unogona kuiwana ne25% dhisikaundi ye € 14,99 chete.
Yn yakapusa musiki wekuratidzira ane mutengo wenguva dzose uri € 29,99 asi ikozvino unogona kuuwana chete € 22,99.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Tora mukana we «12starapps» kutengesa kweKisimusi